ရေသန့်စက်ရုံ | တရုတ်ရေသန့်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော Corrosion Inhibitor 99.5% အမှုန့် 1,2,3-Benzotriazole (BTA) cas 95-14-7
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ချေးတား 99,5% အမှုန့် 1,2,3-Benzotriazole (BTA) 95-14-7 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ကို CAS: ဓာတုအမည်: 1,2,3-Benzotriazole (BTA) CAS NO .: 95-14-7 ဖော်မြူလာ: C6H5N3 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု - ၉၉.၅% min ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အသုံးပြုမှု - BTA သည်ခါးသော၊ အနံ့မရှိသော၊ ဆူပွက်နေသည့်အချက်မှာ ၂၀၄ ℃ (15mmHg)၊ အရက်၊ benzene-toluene-chloroform နှင့် dimethylformamide နှင့်ပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သံချေးမကျစေခြင်း၊ အေးခဲစေသည့်အရည်၊ ဓါတ်တိုးပစ္စည်း (ဆီချောဆီ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီအပါအဝင်) အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အရည်အသွေးမြင့် Isothiazolinones CMIT / MIT cas 55965-84-9
2-methyl-3 (2H) -isothiazolone / Isothiazolinone နှင့်အတူ 5- Chloro-2-methyl-3 (2H) -isothiazolone CMIT-MIT cas 55965-84-9 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: Isothiazolinone CMIT-MIT Isothiazolinone CMIT-MIT ရှုပ်ထွေးသော 5-Chloro-2-methyl-3 (2H) -isothiazolone 2-methyl-3 (2H) -isothiazolone CAS အမှတ် .: 55965-84-9 လျှောက်လွှာ: အလှကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ဆေးသုတ်ဆေးများ၊ ရေအခြေခံသည့်ပေါ်လီမာ၊ သတ္တုဖြတ်တောက်နိုင်သောအရည်များ၊ ကော်၊ မှင်၊ ဆိုးဆေးများနှင့်ပါဖင်အရည်၊ လည်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
31497-33-3 cas အရည်အသွေးမြင့် Polyethylene glycol monomethallyl အီ HPEG (သို့မဟုတ် VPEG)
အရည်အသွေးမြင့် Polyethylene glycol monomethallyl အီ HPEG (သို့မဟုတ် VPEG) 31497-33-3 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: Polyethylene glycol monomethallyl အီ HPEG CAS: 31497-33-3 MF: CH2 = C (CH3) CH2O (CH2CH2O) nH Applications ကို: HPEG သည်အဆိပ်မဟုတ်သော၊ ကောင်းမွန်သောရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပြီး hydrolytic ဆိုးရွားမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်းများစွာနှင့်ရောထွေး။ ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပျံ့နှံ့လွယ်သောသိုလှောင်ရုံရှိသည့် polycarboxylate ရေလျှော့ချသောပစ္စည်းအတွက်အရေးကြီးသောကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။ ဟေ့ ...
စက်ရုံမှ 10% BIT 1,2-Benzisothiazolin-3-one CAS 2634-33-5
စက်ရုံထောက်ပံ့မှု 10% BIT 1,2-Benzisothiazolin-3-one CAS 2634-33-5 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: 1,2-Benzisothiazolin-3-one အခြားအမည်: 10% BIT CAS အမှတ် .: 2634-33-5 အသုံးပြုခြင်းနယ်ပယ်ရေကိုအခြေခံသည့်ပေါ်လီမာ၊ သားရေ၊ ဆေးသုတ်၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်၊ ကော်၊ မှင်၊ ဆိုးဆေးများ၊ - ဗက်တီးရီးယားများစွာ၊ မှိုများနှင့်တဆေးများကိုသတ်ဖြတ်ရန်အတွက်ဇီဝပစ္စည်းအားကာလကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်း၊ ...
အရည် HEDP 60% 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid CAS 2809-21-4 Etidronic acid monohydrate
အရည်အသွေးမြင့် 99% Diethylene glycol monoethyl ether acetate (DCAC) CAS 112-15-2 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: Diethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်စစ် (DCAC) CAS: 112-15-2 MF: CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC2H5 အဆင့်: 99% min အင်္ဂါရပ်များ: HEDP တစ်ခု organophosphoric အက်ဆစ်ချေး inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Fe, Cu နှင့် Zn စသည်တို့ကိုသတ္တုအိုင်းယွန်းများနှင့် chelate နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်သောရှုပ်ထွေးသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသတ္တု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဓာတ်တိုးပစ္စည်းများပျော်ဝင်နိုင်သည်။ 250 အောက်တွင်℃ HEDP သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပမာဏနှင့်ချေးခြင်းတားဆီးခြင်းကိုပြသသည်။
အမှုန့် HEDP 90% 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid CAS 2809-21-4 Etidronic acid monohydrate
အမှုန့် HEDP 90% 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid CAS 2809-21-4 Etidronic acid monohydrate ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမှုန့် HEDP 90% အခြားအမည်များ: ၁-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid CAS အမှတ်။ 2809-21-4 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C2H8O7P2 ပုံပန်းသဏ္ဌာန် - အဖြူရောင်အမှုန့်အသုံးပြုခြင်း - ရေသန့်စင်ခြင်း - သန့်စင်ခြင်း - ၉၀% မိနစ်အသုံးအဆောင်များ - ၁.HEDP ကိုရေအေးစနစ်၊ ရေနံတွင်းနှင့်ဖိအားနိမ့်သောဘွိုင်လာများသို့လည်ပတ်ရာတွင်စကေးနှင့်ချေးခြင်းတားဆီးခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား, ဓာတု ind အဖြစ် ...
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်း ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၉၀% Polycarboxylic antiscale နှင့် dispersant အတွက်ဆိုဒီယမ် polyacrylate 9003-04-7
ကောင်းသောစျေးနှုန်း 30% 40% 50% 90% Polycarboxylic antiscale နှင့် dispersant များအတွက်ဆိုဒီယမ် polyacrylate cas 9003-04-7 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: ဆိုဒီယမ် polyacrylate အခြားအမည်များ: အရည်ဆိုဒီယမ် polyacrylate 30%; အရည်ဆိုဒီယမ် polyacrylate 40%; အရည်ဆိုဒီယမ် polyacrylate 50%; အမှုန့်ဆိုဒီယမ် polyacrylate 90% CAS အမှတ် .: 9003-04-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: (C3H3NaO2) n အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်အမှုန့် / အရောင်မရှိသောအရည်လျှောက်လွှာ: ရေသန့်စင်ခြင်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု - ၃၀% ၄၀% ၅၀% - ၉၀% Properties: ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ပိုလီမာဒြပ်ပေါင်းများ ...
စက်ရုံသည်စျေးနှုန်းကောင်း BTA-Na ၄၀% / ၅၀% ဆိုဒီယမ် benzotriazole CAS 15217-42-2; 148918-02-9
ကောင်းသောစျေးနှုန်း Benzotriazole ဆိုဒီယမ် BTA-Na ၄၀% ဆိုဒီယမ်ဘန်ဇိုထရိုင်ဇလက်လက် CAS 15217-42-2; 148918-02-9 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ဓာတုဗေဒအမည်: ဆိုဒီယမ် benzotriazolate ထပ်တူအဓိပ္ပာယ်တူ synonyms: Benzotriazole sodium; Benzotriazole ဆိုဒီယမ် BTA-Na 40%; BTA-Na 40%; ဆိုဒီယမ် BTA မော်လီကျူးဖော်မြူလာ6C6H4N3Na CAS - 15217-42-2 သို့မဟုတ် 148918-02-9 မိတ်ဆက် - ရေသန့်စင်ရေးပစ္စည်းများသည်ရေသန့်စင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောဓာတုပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကိုဓာတု၊ ရေနံ၊ အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုး, constru ...
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်း CAS 9003-05-8 PAM Polyacrylamide အမှုန့်သည်ရေကုသမှုအတွက်
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်း CAS 9003-05-8 PAM ရေသန့်စင်ခြင်းအတွက် Polyacrylamide အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည်: Polyacrylamide CAS အမှတ် .: 9003-05-8 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C3H5NO PAM သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည့်ပိုလီမာအား flocculation, thickening၊ ညှပ်ခြင်း၊ ခုခံခြင်းလျှော့ချခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေနံတူးဖော်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေးအဝတ်လျှော်ခြင်း၊ စာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေသန့်စင်ခြင်းစသည်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ PAM အမျိုးအစား: Anionic PAM ကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တုဓာတ်များရွေးချယ်ခြင်း၊f...
စျေးနှုန်းကောင်းရေသန့်စင်ဆေးဝါးများ Trichloroisocyanuric acid 90% TCCA အမှုန့် / တက်ဘလက် CAS 87-90-1
စျေးနှုန်းချိုသာသောရေကုသမှုဓာတုပစ္စည်းများ Trichloroisocyanuric acid 90% TCCA အမှုန့် / တက်ဘလက်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် Trichloroisocyanuric acid
Synonyms CC TCCA 90%; 1,3,5-Trichloro-1-triazine-2,4,6 (1H, 3H, 5H) -trione ။
CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 87-90-1
စျေးနှုန်းချိုသာသောရေကုသမှုဓာတု Polymaleic Acid (HPMA) Hydrolyzed Polymaleic Anhydride CAS 26099-09-2
စျေးနှုန်းကောင်းသည့်ရေကုသမှုဓာတု Polymaleic Acid (HPMA) Hydrolyzed Polymaleic Anhydride CAS 26099-09-2 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်အမည် - Hydrolyzed Polymaleic Anhydride အခြားအမည်များ - Hydrolyzed Polymaleic Anhydride (HMPA); Polymaleic Acid CAS နံပါတ် .: 26099-09-2 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: (C4H404) n အသွင်အပြင် - မှောင်မိုက်သောအသားအရောင်ပွင့်လင်းသောအရည်အသုံးပြုခြင်း - ရေသန့်စင်ခြင်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု - ၅၀% min အင်္ဂါရပ်များ - HPMA သည်မော်လီကျူးအလေးချိန် ၄၀၀ မှ ၈၀၀ ထိရှိပြီးမော်လီကျူးအလေးချိန်နိမ့်သည်။ ။ အဆိပ်အတောက်မရှိပါ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်း Organic intermediate 2-Iodo-1- (4-methylphenyl) -1-propanone CAS 236117-38-7
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်း Organic intermediate 2-Iodo-1- (4-methylphenyl) -1-propanone CAS 236117-38-7 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ဓာတုဗေဒအမည်: 2-Iodo-1- (4-methylphenyl) -1-propanone CAS: 236117- 38-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C10H11IO သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု - ၉၉% သည်ထိရောက်မှုရှိသောဆေးဝါးအလယ်အလတ်များ